musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Kubhururuka kwendege kuenda kuUSA kunokwira
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Kubhururuka kwendege kuenda kuUSA kunokwira.
Kubhururuka kwendege kuenda kuUSA kwakwira zvichitevera zviziviso zviviri zvekuti kwaizovhurwa vachengeti vekunze vafambi munaNovember.
Yepamusoro yekutanga yaive yekufamba nekukurumidza mushure mekuzorora kwezvirambidzo mukati mevhiki kutanga kwaNovember 8.
Yepiri yepamusoro yaive pamusoro peKisimusi, ichiwana 16% yemabhuku mukati mekisimusi svondo uye 14% vhiki rapfuura.
Kuwedzera kwakanyanya kwekubhurocha kuUSA panguva yeKisimusi kunotarisirwa mumavhiki anouya.
Tsvagurudzo nyowani inoratidza kuti kubhururuka kwendege kuenda ku USA dzakakwira zvichitevera zviziviso zviviri zvekuti kwaizovhurwa kune vachengeti vekunze vafambi munaNovember. Pakazosvika pakati paGumiguru, kubhuka kwevhiki nevhiki kwakapfuura 70% yepre-denda mazinga.
Chiziviso chekutanga chakaitwa musi wa20th Nyamavhuvhu, apo White House yakati vaenzi vanobva kuUnited Kingdom, Ireland, nyika 26 dzeSchengen, China, India, South Africa, Iran neBrazil vanobvumidzwa kupinda USA, pasina kuiswa kwake oga, chero bedzi vakabayiwa nhomba yakakwana. Izvo zvakakonzera kupindura nekukasira, nevhiki-pa-svondo kubhuka kubva kuUK kusvetuka 83%, kubva kuBrazil ichisvetuka 71%, uye kubva ku EU kusvetuka 185%!
Chiziviso chechipiri chakaitwa pa15th Gumiguru, apo Mutungamiri weU.S.Mubatsiri weVanyori Munyori, Kevin Munoz, anonzi 8th Mbudzi sezvo zvirambidzo zvezuva zvaizorerutswa. Svondo-pa-vhiki kubhuka kwakakwira zvakakwira zvakadaro, kuchisvetuka 15% kubva kuUK, 26% kubva kuEU uye 100% kubva kuBrazil.
Tichitarisa kugoverwa kwemabhuka akasimbiswa, ekusvika munaNovember naDecember, kubva kune iwo matatu misika sosi (Brazil, EU uye UK), pakanga paine mbiri yepamusoro. Nhamba yekutanga yaive yekufamba nekukurumidza mushure mekuzorora kwezvirambidzo mukati mesvondo rinotanga 8th Mbudzi, kuzadzisa 15% yemabhuku. Nhamba yechipiri yaive pamusoro peKisimusi, kuwana 16% yekubhuka mukati mesvondo reKisimusi uye 14% svondo rapfuura.
Iyi data zvakare inoratidza zvekare kukura kukuru kwekuda kwekufamba. Pakarepo vanhu vakanzwa kuti vaizobvumirwa kushanyira USA zvakare; vakabhuka; uye chikamu chakakura chakabvumirwa kubhururuka nekukurumidza sezvavanogona.
Izvo zvinonakidzawo kuziva kuti kubhuka kwakakwira kumusoro kamwe chete zuva chairo rakapihwa. Izvozvo hazvishamisi zvachose nokuda kwezvikonzero zviviri. Kutanga, chokwadi chezuva chairo rinoita kuti munhu ave nechivimbo.
Chechipiri, avo vaida kufamba mwedzi waMbudzi usati wapera vaisakwanisa kuita chitsidzo kudzamara vaziva zvechokwadi kuti vaigona kufamba pavaida. Kuwedzera kwakadzama kwemabhuku kuUSA panguva yeKisimusi kunotarisirwa mumavhiki anotevera.